« Izay tsy mahay manaja ny hita, lava fahoriana ». - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Efa manomboka ny taom-pianarana vaovao ho an’ny sekoly sasantsasany. Heno etsy sy eroa ny fahasahiranan’ny ray aman-dreny amin’ny fampidirana ny mpianatra, indrindra amin’izao aorian’ny valan’aretina nandringana zavatra betsaka izao. Betsaka ireo ray aman-dreny no very fanahy mbola velona eo am-pieritreretana izay azo atao hahitana vola hamerenana ny ankizy sy ny tanora any an-tsekoly. Tsy hita izay hosarangotina.
Mahatsiaro ny tenin’Ineny fahavelony aho eto. Io noraisiko ho lohateny io ilay teny famerimberiny taminay zanany, fony izy nanabe anay hahay hanaja sy hampiasa tsara ireo fitaovana teo am-pelatanana : na fitafiana izany, na ny kahie amam-boky sy ny penina amam-pensilihazo, na ireo fitaovana tao an-trano. Tsy nisy very tamin’izany na takela-taratasy iray aza. Tena niainana ny hiran’i Lesabotsy hoe : ny kitapony, nolovainy tamin’ny zokiny lehibe indrindra.
Tsy toy ny fahantrana misy sy hita ary iainana amin’izao fotoana izao ny fahantrana nisy tamin’izany. Na izany aza, dia tena hay ny nitsitsy sy ny nanaja izay teo am-pelatanana.
Lasa ny saina eo am-pandinihana ny zava-misy ankehitriny. Azo antoka fa tsy vitsy ireo mpianatra narian’ny covid-19 ka tsy ho tafaverina intsony any an-tsekoly. Amin’ireo mba tafaverina indray, dia ho betsaka ireo tsy ho afaka hiatrika tsara ny fianarana noho ny tsy fahampian’ny fitaovana hoenti-miatrika izany.
Betsaka ny fotoana tsy nianarana tamin’iny taom-pianarana lasa teo iny, ny taona 2019-2020. Azo atao tsara ny mifampitsinjo ka mandray fanapahan-kevitra vaovao, tsy nahazatra hatramin’izay. Azo atao tsara ny mandray ireo kahie nampiasaina tamin’ny herin-taona, mbola tsy lany, ka ireny aloha no ampiasaina anombohana ny taona vaovao. Azo atao ny manajanona takelaka iray fotsy, hanavahana ny tamin’ny taona lasa sy ny amin’ity taona vaovao ity.
Betsaka ny tombontsoa azo avy amin’izany. Ny voalohany dia ny fanalana fahasahiranana ny ray aman-dreny. Ny faharoa dia ny fanabeazana ny mpianatra hahay hitsitsy sy tsy hirobaroba. Ny ankoatr’izay dia fiarovana ny tontolo iainana satria sady mampihena ny fako (noho ny tsy fandanindaniana fahatany amin’ny fampiasana taratasy) no mampihena ihany koa ny fanapahana hazo (amin’ny famokarana taratasy).
Misy sekoly efa mampihatra io fomba vaovao io ka mahafaly ny ray aman-dreny izany. Ilaina ny fifampitsinjovana amin’izao fotoana mampitombo ny fahasahiranana sy ny fahantrana izao. Ilaina ny fahaizana manaja sy mikajy tsara izay eo am-pelatanana ary sorohana araka izay azo atao ny fandanindaniam-poana. Ampiasaina hatramin’ny farany ny zavatra rehetra : ny penina, ny kahie sy ny hafa rehetra.
Dia mirary fahombiazana ho an’ny rehetra.
Sr Monic Soanambinina,
Antilin’I Madagasikara : Fiofanana andiany faha 16 ho an’ny mpampiofana mpanampy - il y a 3 jours